News Collection: यही ताल हो भने म पार्टीमा बस्दिन : वैद्य
भोजराज भाट, पालुङटार, मंसिर ७- वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य 'किरण'ले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबाट आफ्ना नीति लिने तर कार्यान्वयन नगर्ने रणनीति जारी राखे आफू पार्टीमा नबस्ने चेतावनी दिएका छन्।
एकीकृत माओवादीको छैठौं विस्तारित बैठकको दोस्रो दिन बन्द सत्रका दोस्रो वक्ता वैद्यले त्यसरी खरो प्रस्तुति दिँदा करीव सात हजार सहभागीबीच सन्नाटा छाएको थियो।
विस्तारित बैठकले क्रान्तिकारी कार्यदिशा नलिए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिँदै 'सडक, सदन र सरकारको मोर्चाले पार्टी संशोधनवादतिर फस्छ, यसले अन्ततः पार्टी एमालेकरण हुने मात्र हो' भने। डेढ घण्टा लामो मन्तब्यमा उनले 'जनयुद्ध र दीर्घकालिन जनविद्रोहबाट मात्र सत्ता कब्जा हुन सक्छ, अहिले जनताको साथ पार्टीलाई छ, राष्ट्रिय परिस्थिति राम्रो छ। पार्टीले विद्रोहको ठोस योजना ल्याउनुपर्छ' भने।
नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न र क्रान्तिको झण्डालाई निरन्तर फरफराउन आफूले फरक दस्तावेज राखेको जिकीर गर्दै वैद्यले अध्यक्ष दाहालद्वारा प्रस्तुत दस्तावेज छुट्टै लाइन नभएको टिप्पणी पनि गरे। 'अहिले पेश भएको उहाँ (दाहाल) को लाइन नै होइन, त्यो त बाबुरामको लाइन हो।'
खरिपाटीको बैठकले आफ्नो लाइन पारित गरेको जिकीर गर्दै उनले 'अध्यक्षले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेकाले' फरक मत राख्नुपरेको प्रष्ट्याए।
आफूले फरक दस्तावेज राखेर नेतृत्व दाबी नगरेको स्पष्टोक्ति पनि वैद्यले दिए। 'प्रचण्ड भन्नुहुन्छ, 'किरण'ले लाइनमात्र ल्याउँछ, नेतृत्व गर्न सक्दैन। ल ठीक छ, लाइन म ल्याउँछु। म नेतृत्व गर्नै नसक्ने भने होइन तर अध्यक्षको रूपान्तरित नेतृत्वमा क्रान्ति सफल गर्ने मेरो सपना हो,' उनले भने, 'अहिले हेडक्वार्टरमा भएको व्यक्तिवादी प्रवृति सच्चाएर अध्यक्ष प्रचण्डकै नेतृत्वमा नेपाली क्रान्ति सफल बनाउने मेरो लक्ष्य हो।'
भारतलाई न्युट्रलाईज नगरी विद्रोह सम्भव छैन भन्ने दाहाल र भट्टराईको प्रस्तावमा वैद्यले असहमति जनाए। 'हामीले भारतीय सत्तासँग मात्र लड्ने हो, त्यहाँका जनतासँग होइन,', उनले भने, 'भारतीय माओवादी र उनका लाखौं समर्थक जनतासँग मिलेरै त्यहाँको सत्ता पक्षलाई न्युट्रलाईज गर्न सकिन्छ।'
पार्टीको गडबडी चुनबाङ बैठकबाट भएको टिप्पणी गर्दै वैद्यले चुनबाङ बैठकले लिएको कार्यदिशा अनुसार साम्राज्यवादी, भूमण्डलीकरण र संक्रमणकालिन गणतन्त्र कहीँ नहुने तर्क दिए।
आफ्नो कार्यदिशालाई दाहालले आत्मसात गर्न नसकेको दुखेसो पोख्दै नेतृत्व रुपान्तरण नभए पार्टी 'एमालेकरण' हुने औंल्याए। 'पार्टी दक्षिणपन्थी हुने खतरा बढेको छ। अहिले पार्टी जुन ढंगले अघि बढ्न खोजेको छ, त्यसले एमाले हुने खतरा छ। म यस्तो अवस्था आयो भने टुलुटुल हेरेर बस्न सक्दिन। यो मेरो खबरदारी हो। बिद्रोहको झण्डा उठाउँछु। यो मेरो खबरदारी हो', वैद्यलाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने।
'जनसरकार, जनअदालत, जनसेना सबै स्वाहाः बनाउने हाम्रो मौलिकता कहाँ रहन्छ?', उनले प्रश्न गरे।
तत्कालीन एकताकेन्द्र-मसालसँग पार्टी एकीकरण हुँदा माओवाद/ विचारधारालाई बहसमा लाने विषय तय भएकोप्रति इंगित गर्दै पार्टीले माओवाद स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बारम्बार दोहोर्‍याएका थिए। उनले दाहालको कार्यशैलीप्रति आक्रोश पोख्दै भने- 'प्रचण्डलाई नेता बनाएकै हुँ। मानेको पनि छु। नेतृत्व क्रान्ति हुन्छ भनेर मान्ने हो। तर, अहिले नेतृत्वमा बोसो बढ्यो।'
वैद्यको भनाइलाई समर्थन गर्दै कार्यक्रम संचालक रामबहादुर थापाले थपे, 'साथी हो, अब बोसो घटाऊ क्रान्ति गरौं।' थापाले त्यस्तो आव्हान गर्दा सहभागीले जोडतोडले ताली बजाए। उनले त्यति भनेर बैठक मंगलबार बिहानसम्मका लागि स्थागित गरेका थिए।
विस्तारित बैठकको पूर्वसन्ध्यामा भट्टराईले सार्वजनिक गरेको 'आजको मार्क्सवाद' नामक सानो किताबबारे भने वैद्यले खुलेरै आलोचना गरे। 'बाबुरामजीले लेख्नुभएको आजको मार्क्सवाद मार्क्सवादको विकास होइन, त्यसले मार्क्सवादलाई भ्रष्टीकरण गरेको छ।'
भट्टराईले स्पष्ट लाइन लिएकोप्रति उनले धन्यवाद दिएका थिए। तर, अध्यक्ष सँधै अस्पष्ट धारणा लिएर अघि बढ्दा पार्टी सही ढंगले अघि बढ्न नसकेको उनले बताए।
उनले आफ्नो प्रस्ताव पार्टी विभाजनका लागि नलिएको स्पष्ट पार्दै नेतृत्वलाई पूरै रुपान्तरण गरेर अघि बढ्न लिएको बताए। अलि बढी भनेँ कि? भनेर कार्यकर्तालाई हँसाउदै वैद्यले दाहाललाई भनेका थिए- 'कार्यदिशा प्रष्ट हुनु पर्‍यो। जनसंविधान लेख्ने भन्ने तर, कार्यान्वयनमा नजाने। यसमा नेतृत्वले सोच्नु पर्‍यो। कि यो मेरो कार्यदिशा होइन भनेर स्पष्ट पार्नुपर्‍यो।'
आफूलाई क्रान्तिकारी मात्रै भनेर उग्रवामपन्थीको बिल्ला भिराइदिएको भनी वैद्यले गुनासो गरेका थिए। सडक, सदन र सरकार तीनवटै मोर्चालाई अघि बढाएर जानुपर्छ भन्नेमा आफू सहमत भएको उनले उल्लेख गरे। तर, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न योजना र कार्यक्रम लिन नसक्नुमा नेतृत्वको कमजोरी भएको उनको जिकीर थियो।
आफूलाई शान्ति विरोधी भनेर पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको दुःखेसो पोख्दै उनले भने, 'मैले पार्टीले सही कार्यदिशा लिनुपर्छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको लक्ष्यलाई पूरा गर्नुपर्छ भनेको हुँ। बाबुरामले भने जस्तै गरी संविधान लेख्दा राम्रै हो। तर, सबै प्रक्रियालाई प्रतिक्रियावादीहरुले अवरोध गरे जनविद्रोहका लागि राजनीति, सांगठनिक, वैचारिक र प्राविधिक तयारी हुनुपर्छ भनेको हुँ।'
'पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी, उग्रवामपन्थी, मध्यपन्थीको भाव झल्किरहेको छ। यी सबै प्रबृत्तिबाट पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ। त्यसकै लागि नेतृत्वदेखि नै रुपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो', वैद्यले भने।
वैद्यले अध्यक्षबाट लगाएको गोंगबु डिनरको आरोप पनि अस्वीकार गरे। गत असारमा जारी केन्द्रीय समितिको बैठकका बेला भएको उक्त डिनरमा बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापासँग आफू पनि बसेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा पार्टी बिग्रियो कसरी सच्चाउने भन्ने चिन्तामात्र व्यक्त गरेको खुलाए। 'त्यसलाई अध्यक्षले अनावश्यक बढाइचढाइ गरेर पार्टीभित्र र बाहिरबाट घेराऊ परेको बोलिदिनुभयो। यसलाई उहाँले सच्चाउनै पर्छ,' उनले भने।